Khariidadaha - Geofumadas
5 daqiiqo oo aamin ah barta Matías Neiff
GIS, qoraalka iyo Macku waa iskudhaf dabiici ah oo kujira baloog waxaan go'aansaday inaan kugula taliyo, maxaa yeelay waxay isiisay qanacsanaan badan inaan helo. Akhrinta sababaha uu bartaani halkaa u gaadhay waxay na fahamsiinaysaa sababta looga tagay qaab-dhismeed duug ah oo Wordpress ah, iyada oo aan lahayn badhanka guriga iyo url yar ...
Aulasca, kheyraad badan oo GIS ah
Fasalka Virtual ee Machadka Cartographic ee Andalusia waa madal lagu rakibay Moodle, oo koorsooyin masaafo ah lagu qaban karo. Marka laga reebo adeegyada badan ee macluumaadka ee laga heli karo Waaxda Guriyeynta iyo Qorshaynta Territoria, waxaan bartay qalab waxbarasho oo ku saabsan maadada geopatial-ka ee dhowaan la galiyay ...
... gvSIG 1.9 xasilloon ayaa yimid ... waxaan qarka u saaran nahay inaan bilowno isku imaatinka IDE khariidadaha ... afgambi, dib u celin, afgambi kale, doorashooyin, cidna ma oga mar dambe ... walaalkay iyo xiddigga mootada ah ayaa is guursanaya ... nooca 3.0 ee geofumadas ayaa dhow. com ... oraahda asalka ah ee bisha: Haddii aad isku dayeyso inaad sameyso mashruuc aad u culus, waxaan kugula talinayaa inaad si xoog leh * ...
... xagee jogtaa saaxiib ...
Jawaabo badan maahan: Safar ahaan. Waxaan doorannaa waxa aan qabanno, ku dhowaad wax kasta, in kasta oo aan u maleynayo in waxyaabo badan aysan ku sii murgsaneyn waqti la'aan darteed. Waa wax lagu qanco in lagu arko natiijooyin xiiso leh degmooyinka oo ciddiyaha iyo xoogaa riix ah ay ku gaari karaan xagga maamulka dhulka. Aynu nidhaahno bal arag sida yar ...
Bishii ugu dambaysay ee Maajo, nooca 1.2 ee dukumiintigan kooban laakiin lagu kalsoon yahay ayaa la daabacay iyadoo magacaas uu u muuqdo inuu ku jeesjeesayo kakanaanta Software-ka ee maaraynta xogta meelaha. Waxaa qoray Stefan Steiniger iyo Robert Weibel oo ka tirsan Jaamacadda Calgary ee California iyo Jaamacadda Zurich siday u kala horreeyaan. ...
Mudanayaal, maalmahan waxaa loogu talagalay orod; inta udhaxeysa dhameystirka qorshaha howlgalka ee sanadkan, bixinta isku dheelitirka wixii dhacay iyo lashaqeynta maayarrada baaxadda waxa heshiiska qiyamka cadastral uu muujinayo sanad siyaasadeed ... uf! U diyaar garowga ku celcelinta koorsada Wadarta Saldhigga; habka, markaan arko sawirro ku jira warbixinta ...
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, tabo cusub, dhowr
Bishii Noofambar ee tagay, kooban ee bisha
Bishan waxay ahayd mid ka wax soo saar yar kuwii hore, markay ahayd 40ka boosteejo, kiiskan waxaan u ahaa 28ka shey ee safaradu dhib badnaayeen iyo baahida loo qabo in la dhammeeyo qodobo sugaya. Barnaamijka 'GIS Free' In kasta oo mawduucan uu dhowaan ku jiro boggeyga, waayo-aragnimada aan ka helayo ...
ArcView Bentley Systems blog Google Earth GvSIG OS KML GIS kala cayncayn ah mapserver egeomates My